Lisitra nandaharana sarimihetsika maitso: Sarimihetsika fohy aziatika miresaka tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy
Sarimihetsika, fanadihadiana fohy manasongadina ny tolona hoan'ny tontolo iainana ao Azia
Voadika ny 29 Jona 2021 7:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, русский, Esperanto , Español, srpski, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2021)
Fitrandrahana harena ankibon'ny tany ao Nueva Vizcaya, Filipina. Pikantsary avy amin'ny sarimihetsika “Dagami Daytoy” (Ity ny taninay). Loharano: Cinemata
Ity lisitra voalahatra ity dia avy amin'ny Cinemata, sehatra iray natao ho an'ireo sarimihetsika avy ao Azia-Pasifika miresaka momba ny sosialy sy ny tontolo iainana. Tetikasa iray an'ny EngageMedia, fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola misahana ny media, teknolojia, ary kolontsaina. Nokiraina sy naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Ho fankalazana ny Andro Erantany ho an'ny Tontolo iainana, rehefa 5 Jona, nikarakara lisitra iray ahitàna ireo fanadihadiana sy sarimihetsika fohy ny EngageMedia. Lisitra misy ny fomba ataon'ireo vondrompiarahamonina manerana an'i Azia-Pasifika amin'ny tolony hiarovana ny tanin-dry zareo tsy hiharan'ny faharavan'ny tontolo iainana, ny fihazakazahan'ny indostria ary ny fiovàn'ny toetrandro. Ireo sarimihetsika ao amin'ny Cinemata, izay fifangaroan'ireo fampakarana sy asa avy amin'ny rakitry ny ela, dia mitondra antsika avy any Nueva Vizcaya (“Dagami Daytoy”) ao Filipina sy ny faritany Nam Dinh ao Vietnam (“Another Exodus”), mankany Sawarak ao Malezia (“Melikin”) ary Taunggyi any Myanmar (“Plastic Outlive Us”).
Hita ao anatin'ireo lisitra ihany koa ireo sarimihetsika nahazo loka, isan'ireny ny “Dagami Daytoy” – Ity ny taninay – (nahazo ny 2020 Gawad Cultural Center of the Philippines Para sa Alternatibong Pelikula at Video), “Anak Pokok” (Sarimihetsika ho an'ny Ala, SXSW Community Screening), ary ny “Kaise Jeebo Re!” (nahazo ny 1997 International Documentary Filmfestival Amsterdam).
Filipina: Dagami Daytoy (Ity ny taninay)
Ao anatin'ny “Dagami Daytoy”, tantarain'i Noni Abao, Filipiàna mpamokatra sarimihetsika, ny fomba ataon'ny vondrompiarahamonin'ireo vazimba teratany ao Nueva Vizcaya, avaratr'i Filipina, hitolomany manohitra ireo faharavana efa am-polon-taona manjo ny tontolo iainana, amin'ny fitakiana ny hanakatonana ny OceanaGold, iray amin'ireo goavan'ny famokarana volamena sy varahina eto amin'izao tontolo izao. Ity fanadihadiana ity no nahazo ny loka 2020 Gawad Cultural Center of the Philippines Para sa Alternatibong Pelikula at Video ary ny toerana faharoa tamin'ny 2020 Yale Environment 360 Video Contest. Rehefa vitan'i Abao ny fanodinana ny sarimihetsika, ampolony maro ireo mpikatroka izay nikarakara fibahanan-dàlana no nosamborina taorian'ny fifandonana tamin'ny pôlisy sy ireo solontenan'ilay orinasa.
Malezia: Doa Seorang Nelayan (Vavaky ny mpanjono iray)
Mihevitra i Zakaria Ismail fa iraka ampanaovin'andriamanitra azy ny miaro ireo mpanjono mpiara-miasa aminy any amorontsiraka manoloana ny fakàna ireo tany ao atsimon'i Penang izay mandrahona ny hanototra ireo faritra fanjonoan-dry zareo amina tany manana habe 4,500 acre (efa ho 1800 hektara mahery). Izy sy ireo mpikambana hafa avy ao amin'ny vohitra misy azy no nomena anarana hoe B40, natao hanondroana ireo 40 isanjaton'ireo tokantrano maleziàna mahantra indrindra tsy mandray afa-tsy RM 3,900 (949 US dollars) na ambanin'izay. Ao anatin'ity tantara miresaka adin-tsaranga, fihenjanana eo amin'ireo soatoavina maoderina sy nentindrazana, ary ny fitsabatsabahana makiavelika ataon'ireo mpisehatra amin'ny pôlitika ity, mitodika amin'Andriamaniny i Zakaria mba hanana fahendrena sy fahasahiana hijoro hanohitra ny iray amin'ireo tetikasa faran'izay feno fahasahiana atao ao Malezia Vaovao.
Indonezia: Tany Reny (Ibu Bumi)
Manahy momba ny faharavan'ny tontolo iainana nitranga tao amin'ny faritra misy azy i Bagus, tantsaha iray 20 taona mipetraka ao amin'ilay faritra mahavokatra ao Kendeng, ao Java Afovoany. Miaraka amin'ilay tarika Kendeng Squad mpiangaly gadona miaraka aminy, asandratr'i Bagus ny ahiahiny. Namokatra lahatsary iray izy “Berani Bertani” nandraketany ny feon'ny natiora sy ny faharavàna mitranga. Antenain'i Bagus ny mozikany fa ho afaka hanainga fanahy an'ireo tanora mba hanohy hiaro ny natiora.
Vietnam: Fifindràna iray hafa
Ny fimonomonon'ny vavaka misandratrandro no ifohazan'ny tanàna iray fonenan'ny mpanjono ao Vietnam, raha mikapoka ireo harambato kosa ny onja mitopatopa. Mahatsiaro mangina ny fahiny ireo efa zokiolona mpanjono, miandry am-pitoniana izay ho tohiny. Efa hain'izy ireo izany fifindràna isaky ny 50 na 60 taona izany, izay tsy maintsy andaozan-dry zareo ny morona noho ny fiovàn'ny toetrandro. Fahiny, ireo faritra niroborobo dia lasa vohitra fonenan'ny mahatra, ary ireo toerana mahavokatra sy ireo tanim-boankazo dia potiky ny fiakaran'ny rano. “Fifindràna iray hafa” dia fanadihadiana fohy novokarin'ilay Vietnamiàna mpamokatra sarimihetsika Le Nguyen.
Myanmar: Tsy Misy
Ity sarimihetsika fandresena lahatra ity dia nampiasaina hanaovana adisisika amin'ny governemanta foibe ao Myanmar mba hampitombo ny famatsiana rano any amin'ireo faritra tratry ny haintany ao Myanmar. Tamin'ny 2016 ilay sarimihetsika no novokarin'ireo mpandray anjara tamin'ilay atrikasa Picture People natao tao Yangon, Myanmar, momba ny fitantaràna an-tsary ny fiovàna.
Indonezia: Dayak Miatrika ireo Goavambe
Ny fampiroboroboana tsy mitsahatra ny indostria ao Indonezia dia loza mitatao ho an'ireo vazimba teratany ary miteraka fifandirana sôsialy sy fahasimbana goavana amin'ny tontolo iainana. Nanaraka ireo vahoaka Dayak ao Kalimantan io fanadihadiana io, momba ny fiatrehany ireo loza mitatao, indrindra fa ny fandoroana ala sy ny setroka misy poizina ao amin'ilay faritra.
Ity ny tantaran'i Melikin. Tantaran'ireo vahoaka vazimba teratany marobe ao Sarawak izay namoy ny tany nahaterahany ka lasan'ireo orinasa mpamokatra menaka voanio. Niaraka tamin'ny fanampian'ireo pôlitisiàna mpanao kolikoly, efa ho 10.000 hektara ny ala sy tany fambolena no voasoroka ary nasiana fefy, manakana ireo vahoaka teratany tsy ho afaka miditra amin'ny tanin'ny razamben-dry zareo.
Kambodza: Fitahirizana ny Ala: Hafatra avy amin'ireo vehivavy teratany
“Tena zavatra iainana ny fiovàn'ny toetrandro. Mba hanamaivanana ny fiantraika ratsy aterany, tsy isalasalàna fa ilaintsika ny mitahiry ny alantsika. Ao anatin'ity lahatsary ity, mba hahafantaranao ny dikan'ny ala amin'izy ireo sy ny fomba nataon'ireo vehivavy teratany nandraisany andraikitra hiarovana ny ala, fantaro ireo vehivavy sy lehilahy avy amin'ny vahoaka teratany Kouy ao Kambodza.”
Myanmar: Mitoetra ela noho isika ny plastika
Ny tanjon'ity fanambaràna ho an'ny daholobe Public Service Announcement (PSA) ity dia ny hitaona ireo mponina ao Taunggyi, Myanmar hanova ny fomba fanaon-dry zareo momba ny fanodinana indray ny akora plastika. Ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa fitantarana an-tsary ho an'ny fiovàna sôsialy Picture People tao Taunggyi, Myanmar tamin'ny Oktôbra 2019 no namokatra ity PSA ity. Taunggyi no renivohitra sady tanàna lehibe indrindra ao anatin'ny Fanjakana Shan, Myanmar ary manamorona ny arabe Thazi-Kyaingtong, any amin'ny haavo 1.436 metatra mahery (4,712 feet).